Warka Fiican ee Dhamaan, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Bawlos wuxuu ku qoray Waraaqda uu ku qoray Roomaanka: “Walaalayaalow, waxaan jeclahay reer binu Israa'iil oo aan Ilaah weydiisto iyaga inay badbaadiyaan” (Rooma 10,1 Tarjubaadda New Geneva).
Laakiin waxaa jirtay dhibaato: «Sababtoo ah iyagu uma ay yaraynin qaddarka Eebbe; Taas ayaan ku caddeyn karaa. Waxa ay u baahan yihiin waa aqoonta saxda ah. Iyagu ma ay aqoonsan waxa xaqnimada Eebbe ku saabsan tahay waxayna isku dayayaan inay Ilaah hortiisa kaga badbaadaan xaqnimadooda. Waxay ku caasiyoobayaan xaqnimada Eebbe halkii ay u gudbin lahaayeen » (Rooma 10,2-3 Tarjumaadda New Geneva).
Israa’iil oo Bawlos ogaa waxay rabeen shaqooyinkooda (adoo dhawraya sharciga) Ilaah hortiisa xaq buu ku yahay.
Sababta oo ah waxa Masiixu higsad ka leeyahay, oo ku alla kii rumaysta isaga, waxaa lagu caddeeyey inuu xaq yahay. Jidka cadaaladdu waa isku mid Yuhuudda iyo kuwa aan Yuhuudda ahayn » (Rooma 10,4 Tarjubaadda New Geneva). Ma gaadhi kartid xaqnimada Ilaah adoo naftaada hagaajinaya. Ilaahay cadaalad ha ku siiyo.
Dhammaanteen waxaan ku noolayn sharciyo mararka qaarkood. Markii aan yaraa, waxaan ku noolaa sharciga hooyaday. Mid ka mid ah qawaaniintooda, ka dib marka aan ku cayaaro dayrka, waxay ahayd in aan iska bixiyo kabtayda kahor intaadan soo gelin guriga. Waxaan ku qasbanaaday in aan ku nadiifiyo kabo si aad u wasakh ah biyo-daaqa ah.
Ciise nadiifi wasakhda
Eebbe waxba kama duwana. Ma doonayo in wasaqda dembiyadeenna lagu faafiyo gurigiisa oo dhan. Dhibaatadu waxay tahay, ma haysanno jid aan ku nadiifinno nafteena mana geli karno illaa aan ka nadiifno. Ilaahay kaliya wuxuu u oggolaadaa kuwa gala gurigiisa kuwa qumman, oo aan dembi lahayn oo daahir ah. Cidina kuma gaari karto daahirnimo naftooda laftooda.
Marka Ciise waa inuu ka soo baxo gurigiisa si uu noo nadiifiyo. Kaliya isagaa noo nadiifin kara. Haddii aad mashquul ku tahay ka takhalusidda wasakhdaada, naftaada waad nadiifin kartaa ilaa maalinta u dambaysa, kuma filna inaad guriga soo gasho. Si kastaba ha noqotee, haddii aad rumeyso waxa Ciise ku leeyahay maxaa yeelay isagu mar hore ayuu nadiifiyey, waxaad geli kartaa guriga Ilaah oo aad miiskiisa u fadhiisan kartaa casho.
Aayadaha 5-15 ee ku sugan Rooma 10 ayaa ka hadlaya xaqiiqda soo socota: Suurto gal ma aha in la ogaado Ilaahay haddii dembiga laga fogeeyo. Ogaanshaha ku saabsan Ilaah ka saari maayo dembigeenna.
Si loo taageero qodobkan Rooma 10,5: 8-5, Bawlos wuxuu soo xigtay Sharciga Kunoqoshadiisa 30,11: 12: «Ha qalbigaaga iska odhan: Yaa doonaya inuu jannada fuulo? - sidii adigoo doonaya inaad Masiixa ka soo dejiso halkaas ». Waxaa la yiri bini aadam ahaan waan raadin karnaa oo aan ka helnaa Ilaah. Xaqiiqdu waxay tahay, Ilaah baa u yimaadda oo wuu na helaa.
Ereyga weligiis ah ee Eebbe wuxuu noo yimid isagoo ah Ilaah iyo nin, Wiilka Ilaah, Ciise Masiix ka yimid xagga jidhka iyo dhiigga. Maanaan ka helin jannada. Xornimadiisa rabbaaniga ah, wuxuu go’aansaday inuu noo yimaado. Ciise wuxuu inaga badbaadiyey dadka isagoo nadiifinaya wasakhda dembiga iyo jidka inoo furaya si aan guriga Ilaah u nimaadno.
Tani waxay kicineysaa su'aasha: ma rumeysan tahay waxa Ilaahay yiraahdo? Ma u malaynaysaa inuu Ciise adiga ku helay oo uu horay u nadiifiyay wasakhdaada si aad hadda gurigiisa u gasho? Haddaad taas rumaysan weydaan, waxaad ka baxsan tihiin guriga Ilaah mana geli kartaan.
Bawlos wuxuu ku hadlayaa Rooma 10,9: 13 - Tarjumaadda cusub ee Genevan: “Markaa haddii aad afkaaga ku qiratid inuu Ciise yahay Sayid oo aad qalbiga ka rumaysatid in Ilaah isaga ka sara kiciyey kuwii dhintay, waad badbaadi doontaa. Maxaa yeelay, waxaa laydinku caddeeyey inaad xaq tahay haddii aad qalbiga ka rumaysatid; Mid baa badbaada haddii mid afkiisa ku qirto "rumaysad". Haddaba Qorniinku wuxuu leeyahay, Ku alla kii rumaysta isaga waa laga badbaadin doonaa halligaadda. (Ishacyaah 28,16). Wax macno ah ma sameyneyso in qof yahay Yuhuudi ama Yahuud aan ahayn: qof walba wuxuu leeyahay isku nin, isla markaana wuxuu u oggolaanayaa qof walba inuu la wadaago maalkiisa uu ku baryo "ducada". Ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, waa badbaadi doonaa " (Yoo'eel 3,5).
Taasi waa xaqiiqda: Eebbe wuxuu ku furtay abuurkiisa xagga Ciise Masiix. Wuxuu dembiyadeenna nadiifiyey, oo wuxuu inaga nadiifiyey allabarigiisa annaga oo aan haysan caawimaad iyo codsi. Haddii aan rumeysanno Ciise oo aan qiranno inuu isagu yahay Sayid, waxaan mar hore ku nool nahay xaqiiqadan.
Bishii Janaayo 1, 1863, Madaxweyne Abraham Lincoln wuxuu saxeexay Bayaanka Xorriyadda. Sharcigan dhaqan galinta ah wuxuu sheegay in dhamaan addoonsiga dhamaan gobolada kacdoonka ka dhanka ah dowlada Mareykanka ay hada xor yihiin. Warka xorriyadda ma uusan helin addoonsiga Galveston, Texas ilaa Juun 19, 1865. Muddo laba sano iyo bar ah, adoomadanu kama warqabin xorriyadooda mana aysan la kulmin xaqiiq ilaa ciidamada Mareykanka ay u sheegaan.
Ciise waa badbaadiyaheenna
Qirashadeenu inama badbaadinayso, laakiin Ciise waa badbaadiyaheenna. Kuma qasbi karno Ilaahay inuu wax noo qabto. Shaqooyinkayaga wanaagsan ma naga dhigi karaan kuwo aan dembi lahayn. Dhib malahan nooca nashaad ee ay tahay. Haddii ay ku saabsan tahay adeeca sharci - sida maalin quduus ah ama ka fogaanshaha alkolo - ama inay tahay shaqada odhaahda "Waan rumeysanahay". Bawlos wuxuu si aan kala sooc lahayn u yidhi: "Markale: Adigu waxaad ku badbaadday nimcada Ilaah, taasina waa rumaysadkaaga. Naftaada kuma lihidin badbaadadaada; maya, waa hadiyad Eebbe » (Efesos 2,8 Tarjumaadda New Geneva). Xitaa rumaysadku waa hadiyad ka timid Ilaah!
Ilaah ma filayo qirasho
Way fiicantahay inaad fahanto farqiga u dhexeeya heshiiska iyo qirashada. Qandaraasku waa heshiis sharci ah oo isweydaarsigu ka dhacayo. Dhinac kasta waxaa ku waajib ah inay wax kale ku beddelaan. Haddii aan heshiis la galno Ilaah, ballanteenna Ciise ayaa nagu waajib ah inaan nafteenna badbaadinno. Laakiin kuma khasbi karno Ilaahay inuu ku matalo annaga wakiilkeenna. Nimco waa Masiixa, oo xorriyaddiisa rabbaaniga ah, go'aansaday inuu na soo dejiyo.
Maxkamad furan, qofku wuxuu qirtaa in xaqiiqda jirta. Dembiile ayaa oran kara: «Waxaan qirayaa inaan xaday alaabtii. Wuxuu aqbalay xaqiiqada noloshiisa. Sidoo kale, xerta Ciise ayaa leh: "Waxaan qirayaa inay tahay inaan badbaadiyo ama Ciise ayaa i badbaadiyay.
Waxaa loogu yeedhay xorriyad
Waxa adoomadu u baahdeen Texas sanadkii 1865 ma ahayn qandaraas lagu iibsanayo xorriyadooda. Waxay ahayd inay ogaadaan oo ay qirtaan inay horay xor u ahaayeen. Xornimadiina horay ayaa loo aasaasay. Madaxweyne Lincoln wuu awooday inuu siidaayo oo wuu iska daayay markiisa. Ilaah xaq buu u lahaa inuu na badbaadiyo isaguna wuxuu ina badbaadiyey nolosha wiilkiisa. Waxa adoomaha Texas ugu baahnaa ay ahayd inay maqlaan xorriyadooda, ay rumaystaan ​​inay ahayd, oo ay sidaas ugu noolaadaan. Addoomayaashu waxay u baahan yihiin qof inuu yimaado oo u sheego inay xor yihiin.
Tani waa farriinta Bawlos ee ku jirta Rooma 10:14 tarjumaadda New Geneva: «Laakiin waa sidaas: waxaad wici kartaa oo keliya Rabbiga haddii aad isaga rumeyso. Adiga kaliya waad rumeyn kartaa haddii aad isaga ka maqashay isaga. Kaliya waxaad ka maqli kartaa isaga haddii uu jiro qof ku dhawaaqaya farriinta isaga ».
Ma qiyaasi kartaa sida ay u noqotay addoomoyadan inay ka jaraan suufka kuleylka 40-ka Texas maalintaas Juun isla markaana ay maqlaan warka wanaagsan ee xorriyadooda? Waxay heleen maalinta ugufiican noloshooda! Rooma 10,15 Bawlos wuxuu ka soo xigtay Ishacyaah: "Sidee quruxsan cagaha kuwa warka wanaagsan keenaya" (Ishacyaah 52,7).
Waa maxay doorkeenu?
Waa maxay doorkeenna qorshaha badbaadada Eebbe? Waxaan nahay farriintiisa farxadda waxaanan u wadnaa akhbaarta wanaagsan ee xorriyadda dadka aan weligood maqal xorriyadooda. Hal qof ma badbaadin karno. Annagu waxaan nahay rasuullo, xiisaha hagida warka una keenaya warka wanaagsan: «Ciise wax walba wuu dhammeeyey, xor baad tahay»!
Reer banii Israa'iil Bawlos waxay ogaadeen inuu warka wanaagsan maqlay. Waxay rumaysan waayeen ereyadii Bawlos u keenay. Miyaad rumeysan tahay xoreynta addoonsigaaga oo aad ku nooshahay xorriyadda cusub?
waxaa qoray Jonathan Stepp